London ilaa Amsterdam Waxaa qoray Eurostar Train Laga soo qaaday € 40 | Save A tareenka
Home > Tareen Travel Holland > London ilaa Amsterdam Waxaa qoray Eurostar Train Laga soo qaaday € 40
Mid ka mid ah kuwa ugu caansan wadooyinka si safarka ee Europe waa ka London si uu Amsterdam, safar deg deg ah iyadoo in ka badan 4 milyan oo rakaab ah samaynta Dilal sannad kasta. Xulashada ugu sareysa ee gaadiidka waa tareen loo maro Eurostar, rail-xawaaraha sare ee isku xira labada caasimadaha Yurub. Wadadan, kaas oo ka furmay 2018, weli doorasho wanaagsan kuwa raadinaya in ay lacag kaydsadaan iyo raaxayso in safarka tareenka siisaa a.
Hoos waxaa ku qoran, waxaad ka heli kartaa dhammaan faahfaahinta aad u baahan doonto si lagaaga caawiyo inaad maamusho safarkaaga London ee Amsterdam Eurostar safarka.
Maqaalkani waxa la qoray si loo baro macaamiisha ku saabsan safarka tareenka oo la abuuray by Save A tareenka, Bogagga Tigidhada Tareenka ee ugu jaban Adduunyada.
Eurostar Tareen Times From London Si Amsterdam
Eurostar ayaa inta badan ka waddaa, iyadoo ilaa 16 bixitaanka maalin kasta ku xiran tahay fasaxyada iyo maalmaha fasaxa. Tareenka ugu horreeya ee ka yimaadda London ilaa Amsterdam maalin kasta wuxuu ka baxaa London St. Pancras at 07:16 iyo qaadataa guud ahaan 3 saacadood oo 55 daqiiqo, yimaada galay Amsterdam Central at 12:11 (Amsterdam Centraal waa magaca Holland in Central Station Amsterdam). Tani inta badan waa mid ka mid ah tigidhada jaban laga heli karaa, sidaas haddii aadan nacay anigoo goor wanaagsan idiin badbaadin kartaa lacag iyo madax ka baxay qeybtii waaberiga.
jeer Route waa saacad ku dhawaad ​​abid, oo caleemo aad fursado badan jeer tagay. tareenka ugu dambeeya ee habeenka ka tago garoonka 17:16 iyo Gaaray 22:11, waxa xaqa ah waqti ku filan oo ku raaxaysan cunto fudud habeenkii ee caasimada Dutch ah. Hubi our site, taas oo aad ka heli karto badhan midig ee shaashadda ama riix SaveATrain.com, loogu talagalay jadwalka London ee Amsterdam Eurostar oo dhammaystiran.
Qiimaha Tareenka London illaa Brussels
Geneva ilaa London Tareenka Qiimaha
Qiimaha Tareenka ee London ilaa Amsterdam
Tayaasha Your Ticket On The Eurostar
Dhammaan tikidhada tareenka ee Eurostar waxaa ku jira ugu yaraan laba qaybood oo ah boorsooyinka iyo boorsada gacanta a. Haddii aad Tegay badan oo boorsooyin arrin, sidoo kale waxaad dooran kartaa tigidh kuu ogolaanaya in aad in ay keenaan waxyaabaha more. Iyadoo diyaaradaha miisaaniyadda laga yaabaa in ka yar jaale hore ay, ajuurada bac iyo kharashka doorashada kursiga si deg deg ah ku dar ilaa, taas oo macnaheedu yahay in aad aakhirka bixinta dheeraad ah oo badan oo dhan yar.
Qiimaha tigidhada London illaa Amsterdam safarka Eurostar waxay u muuqdaan inay isbeddelaan waxyaabo badan, sidaa darteed waxaan ku talinaynaa in tikidhada iibsato sida ugu dhaqsaha badan aad tahay awood. Guud ahaan, tigidhada kuwan iska on sale saddex bilood ka hor, inkasta oo ku beegnaa waxaad ka heli kartaa ilaa lix bilood ka hor taariikhda safarka. Waxaan ku talinaynaa isticmaalaya Save A Tareen website tigidhada tareenka dunida si aad u ogaato oo jartaan tikidhka tareenka aad, taas oo si toos ah u baadhaa oo dhan alaabada la heli karo si aad u hesho qiimaha sicirka suurto gal, damaanad qaaday.
Qiimaha iyo Noocyada Tikidhada Oo London Loogu Yimaado Amsterdam By Eurostar Train
tareen Eurostar wuxuu ku shaqeeyaa qolalkii saddex-fasalka ku xiran miisaaniyada. Waayo, kuwa si fudud u raadinaya in ay helaan mid ka mid meel kale, tigidhada fasalka labaad waa ikhtiyaarka ugu fiican. Kuwa on safarka ganacsiga halkii door bidaan karaan tigidh Standard Premier ama Business Premier, labadaas arrimood oo laguu ogolaado in aad si fiican ugu fariisan in tababarayaasha fasalka-koowaad iyo in la siiyo cuntada ka inta lagu guda jiro safarka.
Sida aan soo sheegnay ka hor, binta kala duwan yihiin sida ay taariikhaha safarka aad, marka waxaad ubaahantahay inaad tikidka tigidhkaaga sida ugu dhaqsaha badan markuu helitaanku furmo. If you book far enough in advance, aad doonaa in la raadinaya in ay bixiyaan oo ku saabsan 92 dollar wareega safarka, ama ku saabsan 46 dollar hal hab. Sugitaanka ilaa daqiiqada ugu danbeysa eryi karaa qiimaha samada sare, kharashka ku dhow laban laabmay dambe aad ka iibsan tigidhka.
Maskaxda ku hay in ka May wadeen, tareenka si toos ah uga soo Central Station Amsterdam London St. Pancras bilaabi doonaan hawlgalka, oo idinka badbaadin doonaa dhowr saacadood oo waqtiga safarka ee aad safarka ku noqoshada. Sidoo kale laga bilaabo jira adeegyo si toos ah Rotterdam. Adeegyadan waxaa sidoo kale jiri doona ka jaban tahay qiimaha hadda.
Waa xusid mudan in Eurostar ah aan la heli karin kuwa qaban pass xadiidka ah, sidaa darteed haddii aad rabto in aad ka dhigi safar this sasabasho ah oo la awoodi karo, gadato tikidh tareen aad ka hor. Waxaad ka heli kartaa tigidhada tareenka online at websites kala duwan, In kasta oo websaydhadaas ay muujinayaan sicir bararka qiimaha tikidhada tareenka ee Eurostar marka la barbar dhigo Save the website A tareenka.
Marka caasimada, aad ku xidhan karto hore u sii wadeen via tiro ka mid ah tareenada kala duwan Amsterdam. Adeegyo tareen xawaare sare leh ayaa sidoo kale loo fidiyaa dhowr meelood oo qaaradda oo dhan ah.
Bremen ilaa Amsterdam qiimaha Tareenka
U sheeg qiimaha Tareenka Amsterdam
Bielefeld illaa Amsterdam Qiimaha Tareenka
Hamburg ilaa Amsterdam Qiimaha Tareenka
On On Tareenka Eurostar laga bilaabo London ilaa Amsterdamn
Marka saarnaa, wadarta waqtiga safarka ee London ilaa Amsterdam tareenka waa qiyaastii 3 saacadood oo 52 daqiiqo. Weheliso aad timaado pre-bixitaanka, wadarta wakhtiga safarka ahaan agagaarka doonaa 4.5 saacadood.
Sida hore u soo sheegnay, waxaa jira lacag la'aan ah WiFi saarnaa, si aad ula socon karto oo dhan aad email iyo baahiyaha warbaahinta bulshada. Iyada oo ku xidhan tigidhka, waxaad sidoo kale madax karaa in macalinka lagu qadeeyo, halkaas oo aad ka heli kartaa cunto, cabitaanka iyo cunto fudud. Haddii aad fadhiisanayso a qol fasalka-koowaad, cuntada si toos ah keeni doonaa, kursigaagu.
Marka, ma jirto baahida loo qabo in ay dhex maraan baasaboorada, in kastoo dib markii Brexit iyo ka saarista ee UK ka soo EU ah adeegyadan laga yaabaa in la beddelo. Hubi in la si loo hubiyo sharciyada maxaliga ah ka hor inta aadan koraan guura.
Qiimaha Tareenka ee London ilaa Antwerp Train
Qiimaha Tareenka ee London ilaa Lille
Strasbourg ilaa London Tareenka
Qiimaha Tareenka ee London ilaa Rotterdam
Dabcan, su'aasha dhabta ah waa sababta dhab Europe waxaa sida ugu wanaagsan la kulmay via safarka tareenka – ka dib oo dhan, this qaaradda iyo sidoo kale-xiran yahay si fudud traversable diyaarad, baabuur, ama baska. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira waxyaabo yar sida jacaylka sida muuqaal duurjoogta ah ka baxsan suuqa kala safarka tareenka, iyo dadka u safraya-markii ugu horeysay waxaa ay ku dhowaad waxba ma dheeraad ah oo ku habboon ka badan bootimaalaysiga on board tareen yar ka hor waxaa ka tago. Tani waa in la barbardhigo qoto dheer in garoomada diyaaradaha Yurub, halkaas oo jeeg-in sare mar waa in ka badan laba saacadood oo aad wakhti dheeraad ah iyo lacag ku qaataan jeebkayga meesha garoonka diyaaradaha.
Isagoo ka hadlayay waqtiga safarka, Europe waxay caan ku tahay xadiidka xawaaraha sare ee ay ku-, taas oo ilaa hadda ka badato waxa jidadka waawayn ay fuuli. Tareenadu oo dhan qaaradda waa deg deg ah oo inta badan si toos ah, taas oo macnaheedu yahay mee waqti yar oo waqti dheeraad ah sahaminta.
tareenada sidoo kale waxay leeyihiin faa'iido u ah si fiican-ku yaalaa waa sida inta badan ka dhisay gudaha bartamaha magaalada. sida caadiga ah ay bixiyaan jeer ka tagay badan maalin kasta on kun oo wadooyinka, taas oo macnaheedu yahay in aad had iyo jeer doonaa ikhtiyaarka ah safarka.
Qiimaha tababarka ee Frankfurt ee London
Gawaarida ku taga London Tareenka
Qiimaha Tareenka London ee Marseilles
Tigidhada Buuggaagta Iyadoo Badbaadin Tareen Loogu Talo Galay London Si Amsterdam Loogu Diyaariyo Tareenka
Raadi goobta si ay u tigidhada buugga oo dhan Meelaha ugu fiican Yurub, lugu daro Belgium, Italy, Switzerland iyo UK (oo ay ku jiraan tareenka ka yimaadda London ilaa Amsterdam oo ay la socoto Eurostar). Our search engine waxaa loogu talagalay in loo badbaadiyo lacag tikidhada oo dhan waxaana ka mid ah ma ajuurada jaale. Waxaannu si sahlan si aad u iibsato by aqbalin in siyaabo kala duwan in ay mushaar, oo ay ku jiraan credit card, Giropay, fiican iyo qaar badan oo.
Sidaas, wax alla wixii aad sabab safarka, haddii aad keligaa ama dad kale lala safraya, qaado dhowr daqiiqo si aad u raadsato tikidhada tareenka ee Badbaadada Tareenka, oo dalab qiimaha ugu hooseeya, damaanad qaaday.
Raadinta inuu kitaabka? qaado 3 daqiiqo oo ka heli tigidh aad London si uu tareenku Amsterdam on www.saveatrain.com . Buuxi taariikhda iyo waqtiga in aad jeclaan lahayd in ay u safraan, oo waxaan ku siin doonaa qiimaha ugu wanaagsan ee safarka.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta? Riix halkan: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/london-amsterdam-direct-train/ - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)
#stpancras amsterdamcentraal europeantravel London longtrainjourneys tareen safarka travelamsterdam travelengland